लगानी सम्मेलन र नेप्से | गृहपृष्ठ
Home सम्पादकीय लगानी सम्मेलन र नेप्से
on: March 26, 2019 सम्पादकीय
लगानी सम्मेलन र नेप्से
लगानी सम्मेलन सफल पार्न धमाधम कानूनहरू पारित भए, तर अर्थतन्त्रको ऐना मानिने शेयर बजारको बेथिति सम्हाल्न भने ध्यान गएको छैन । विदेशीहरूले नेपालमा लगानी गर्नुअघि पक्कै पनि नेपालको शेयर बजारको अवस्था हेर्नेछन् । त्यसबाट उनीहरू सकारात्मक होलान् कि नकारात्मक ? वास्तविक लगानी नै भित्र्याउन नेप्सेले दिने संकेतबारे सरकार सचेत बन्ला त ?
विदेशी लगानीकर्तामा नेपालको शेयर बजारबाट पनि सकारात्मक सन्देश जानुपर्छ । यसका लागि युद्धस्तरमै नेप्सेको सफ्टवेयर सुधारका लागि तत्काल प्रभावकारी कदम चालिहाल्नुपर्छ ।
नेपालको शेयर बजारको विगतको प्रवृत्ति विश्लेषण गर्ने हो भने फागुन र चैत महीना बढी कारोबार हुने समय हो । गत फागुनको अन्ततिर एकै दिनको कारोबार ५० करोडभन्दा माथि पुगिसकेको थियो । त्यस्तै बजार पनि ११६० भन्दा माथि पुगिसकेको थियो । तर, त्यो टिक्न सकेन । कुनै बेला दैनिक कारोबार झन्डै ३ अर्ब समेत पुगेको थियो, तर अहिले साप्ताहिक कारोबार पनि त्यति हुन सकेको छैन । यसरी कारोबार रकम खुम्चनुमा नेप्सेको सफ्टवेयर प्रणालीमा बारम्बार समस्या आउनु एउटा प्रमुख कारण हो । सफ्टवेयरमा समस्या आएपछि विक्रीकर्ताले शेयर बेच्न सकेनन् । यो समस्या समयमा समाधान नहुँदा कारोबार रकम खुम्चन पुगेको हो । यसबाट एकातिर सरकारले राजस्व गुमायो भने लगानीकर्ताले शेयर बेचेर आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्न पनि पाएनन् । यो भनेको शेयरमा हुने तरलतामै समस्या आउनु हो । त्यही भएर लगानीकर्ताहरूको शेयर बजारप्रतिको मनोविज्ञानमा परिवर्तन आयो र उनीहरू यसबाट तर्सिन थाले । यही कारण केही लगानीकर्ता सफ्टवेयरले काम गरेको मौकामा घाटा खाएर भए पनि शेयर बेचेर बाहिर निक्लन तयार भए ।
सरकारले सम्मेलनमा करीब ३० खर्बका ६ दर्जन परियोजनाहरू लगानीका लागि प्रस्तुत गरेको छ । सरकारले अपेक्षा गरेअनुरूप नै लगानीकर्ताहरूको उपस्थिति हुने देखिन्छ । तर, लगानीकर्ताले नेपालको शेयर बजारबाट अर्थतन्त्रलाई हेर्ने सम्भावनाबारे सरकारको ध्यान गएको छैन । नेपालको शेयर बजारमा बैंक, बीमा, जलविद्युत् तथा केही उत्पादनमूलक कम्पनी र सेवाप्रदायक कम्पनीका शेयरहरूको कारोबार भइरहेको छ । सरकारले लगानीका लागि प्रस्ताव गरेका परियोजनाहरू यिनै क्षेत्रका छन् । लगानीकर्ताले हेर्ने पनि यिनै क्षेत्र हुन् । लगानी सम्मेलनमा आएका सम्भावित लगानीकर्ताले सरकारले प्रस्तुत गरेको परियोजना र प्रतिफलको आ“कडामात्रै हेरेर पक्कै पनि लगानी गर्नेछैनन् । यसका लागि उनीहरूले कम्पनीहरूले दिइरहेको प्रतिफल, बजारमा त्यस्ता कम्पनीको शेयर कारोबार आदिको पक्कै विश्लेषण गर्नेछन् । उनीहरूले अहिलेको नेपाली शेयर बजार हेरेर राम्रो वा नराम्रो के निष्कर्ष निकाल्लान्, विचारणीय छ ।
नेपालका आन्तरिक लगानीकर्ता नै असन्तुष्ट रहेको तथ्य नेप्सेको केही समयको कारोबारको विश्लेषणबाट स्पष्ट हुन्छ । विदेशी लगानीकर्तामा नेपालको शेयर बजारबाट पनि सकारात्मक सन्देश जानुपर्छ । यसका लागि युद्धस्तरमै नेप्सेको सफ्टवेयर सुधारका लागि तत्काल प्रभावकारी कदम चालिहाल्नुपर्छ । बारम्बार सफ्टवेयरमा समस्या आउनुको कारण के हो ? नेप्सेमै प्राविधिक जनशक्तिको अभाव भएको हो ? अनलाइन प्रणालीको जिम्मा लिएको वाइकोकै कारण समस्या आएको हो ? उसको प्राविधिक साझेदारको कमजोरी पो हो कि ? वा ब्रोकरहरूले असहयोग गरेर समस्या निकालेका पो हुन् कि ? कारण जेसुकै होस्, यो समस्याको समाधान गरिहाल्नुपर्छ ।
हुन त नयाँ प्रणालीमा जाँदा शुरूमा समस्या आउनु स्वाभाविकै हो, तर अनलाइन शुरू भएको यतिका दिनसम्म पनि समस्या दोहोरिइनु र समाधान नहुनुले लगानीकर्ता अत्तालिने अवस्थामा पुग्नु पक्कै राम्रो होइन ।
नेप्सेमा शेयर घटाउँदै राष्ट्र बैंक : १७ लाख ३० हजार कित्ता लीलामीमा
नेप्से परिसूचक ०.६२ अंक घट्यो, कारोबार रकम पनि कम
२.७८ अंक घट्यो नेप्से, कारोबार रकममा भने सुधार